အမျိုးသားစာပေတစ်သက်တာဆုရ ဦးဝင်းမွန်(တက္ကသိုလ်ဝင်းမွန်) ကွယ်လွန် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂- မြန် မာစာပေလောက၏ အားထားရ သည့် အမျိုးသားစာပေ တစ်သက် တာဆုရ ဦးဝင်းမွန် (တက္ကသိုလ် ၀င်းမွန်) သည် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် အင်္ဂါနေ့ ည ၁၀ နာရီကျော် ခန့်က အမှတ် (၃၅)၊ ပန်းတနော် လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် နေအိမ် တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ဦးဝင်းမွန်ကို အောက်တို ဘာ ၁၂ ရက် ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီမှာ ထိန်ပင်သုသာန် သို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆရာကြီးသည် မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆောင်း ပါး၊ စာတမ်းများကို တက္ကသိုလ်ဝင်းမွန် ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသား ခဲ့သလို ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထု၊ စွန့်စားခန်းများ ကို အောင်ခန့်ကလောင်အမည်ဖြင့် မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် (၇၉) နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာကြီးသည် လေဖြန်းရောဂါဖြစ် ပွားခဲ့မှုရှိသလို အခြားရောဂါများ လည်း ရှိခြင်းကြောင့် ရုတ်တရက် အမောဖောက်ပြီး ဆုံးပါးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကွယ်လွန်သူ တက္ကသိုလ် ၀င်းမွန်၏ သမီးဖြစ်သူ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာလွင်လွင်မွန်ကပြောသည်။
ဆရာကြီး၏ တက္ကသိုလ်ဝင်း မွန်ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသား ခဲ့သည့် “ဆားဒယ်” ၊ “မိဖြူ” ဆောင်း ပါးများမှာ အလယ်တန်း မြန်မာစာ လက်ရွေးစင်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ခေတ်သစ် ကဗျာမိတ်ဖွဲ့စာအုပ်နှင့် အမျိုးသားစာပေ၊ စာပဒေသာဆုနဲ့ ဆာဝေါလ တာစကော့၏ျှကနညအငညီကမတမေိ ၀တ္ထုကို ရဲသွေးနီနီအ မည်ဖြင့် မြန်မာပြန်ဆိုရာ အမျိုးသား စာပေ၊ ဘာသာပြန်စာပေဆု ရရှိ ခဲ့သည်။ သူမတူ ထူးခြားအရည် အသွေးရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာကြီးအတွက် မိသားစုနှင့်ထပ် တူ ၀မ်းနည်းရကြောင်း ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် မြန်မာ စာဌာန၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး (ငြိမ်း) ဒေါ်မာလေး(တက္ကသိုလ်ဝင့် မာ)က ပြောသည်။
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ် ၀င်းမွန် ကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မွေး ဖွားခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်ကောလိပ် မြန်မာစာဌာနတွင် နည်းပြဆရာ၊ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) မြန်မာ စာဌာနတွင် လက်ထောက်ကထိက နှင့် ဌာနမှူးတာဝန်များကို ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပီကင်း မြို့တော် နိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံ ကျောင်းတွင် မြန်မာစာပေပညာ ရှင်အဖြစ် နှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကထိကဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကထိက မြန်မာစာဌာနမှူး၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနတွင် တွဲဖက် ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာဌာနမှူးအဖြစ် အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီး မကွယ်လွန်မီထိ မြန်မာစာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် မြန်မာ စာပါရဂူသင်တန်းသားများကို စာပေပို့ချခဲ့သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့လှူဒါန်းရန် မန္တလေးဂီတသဘင်အနုပညာရပ်ဝန်းမှ ရန်ပုံငွေပဒေသာကပွ??
မိုင်းသင်တန်းတွင် သရုပ်ပြနေစဉ် မိုင်းအစစ် နင်းမိသဖြင့် နည်းပြနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး ဒဏ်?
မိမိဒေသ မဟုတ်သည့် အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် အိမ်ရာများ မရှိသောကြောင?
လှိုင်သာယာတွင် ဈေးကြိုကားနှင့် ကန်တာယာဉ် တိုက်မိ၊ လေးဦးသေ ၁ဝ ဦး ဒဏ်ရာရ
မကွေးမြို့နယ် ကျေးရွာ ၂ ရွာအတွက် ရရှိသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ရန်ပုံငွေတွင် ၂၃ ရွာ လမ်းဖော??
ပရိသတ်နှစ်ဦး သူမရှေ့တွင် စေ့စပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တေလာဆွဖ် အံ့သြဘနန်းဖြစ်
မိုးကုတ်မြို့တွင် နိုင်ငံခြားသားများ ကျောက်မျက် ရောင်းဝယ်သယ်ယူရာ၌ အခက်အခဲများ ရှိနေ၊ GTC(Gem Trad
အီရန်နျူကလီးယား ဘဘောတူညီချက်ကို နာက်ထပ် ရက်ပေါင်း ၁၂ဝ သာထောက်ခံတော့မည်ဟု ထရန့်ပြော
ဝေဖန်မှုများကြောင့် စပိန်အသင်းမှ ပီကေး အနားယူမည် မဟုတ်
”အခုရိုက် အခုတင် ဇာတ်ကားတွေက များနေတော့ အရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေက နစ်နာကုန်တယ်” သက်မွန်ြ